Ahịa - ezigbo ụlọ nyocha
Azụmaahịa Physis Realty
Na Physis Realty, atụmatụ ahịa anyị na-enweghị atụ na ikike ịkparịta ụka n'resultntanet na-eme ka ahịa na ahịa dị elu karịa.
Eziokwu nke Physis bu ndi anakpo dika # 1 nochiri anya ulo oru na World Street site na Wall Street Journal, Real Trends, Ọkaibe Investor Magazine, akwụkwọ akụkọ Financial Times na Variety.
Ọkachamara anyị enweghị oke, ebe anyị na-ere ihe karịrị 600 naanị World Class properties kwa afọ na ụwa. Anyị anaghị etinye ụlọ gị n'ime “sistemụ” dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbazinye ego, anyị na-ewere usoro nkeonwe na nke ọ bụla maka ụlọ ọ bụla - nke ahụ bụ ihe na-eme ihe dị iche.
Anyị na-agwa ndị ahịa anyị ndụmọdụ site na mbido, iji chọpụta usoro na usoro kachasị mma iji ree ụlọ, yana ọnụahịa kachasị elu.
Ọdịdị n'ọdịdị, na anyị bụ ndị okike n'ịmepụta na ijikwa ngosipụta nke ụlọ gị, na-aghọta na ihe ịga nke ọma dabeere na nkọwapụta, yana na ọ dịghị ihe dị mkpa karịa ịrụsi ọrụ ike, oké ọchịchọ, na nraranye gabigara ókè.
Iweghachite Physis Marbella
Kwụ ụgwọ ụlọ na Spain
Nweghachi Ihe onwunwe maka ire ere na Spain
Na-ere Ngwongwo na Spain
Nhọrọ Ngwongwo Spanish
Nyocha Ikos Andalusia
Ibi na Mallorca
Marbella nke Sierra Blanca
Ibi na Ibiza
Ndepụta Ọhụrụ Ọhụrụ